सुदूरपश्चिममा साढे पाँच सय हेक्टरमा मुङ खेती
१ बैशाख २०७६, आईतवार १५:४९
धनगढी, वैशाख १ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस वर्ष साढे पाँच हेक्टर जमिनमा मुङ खेती विस्तार गरिँदैछ । कैलाली र कञ्चनपुर गरी दुई जिल्लामा मात्रै मुङ खेती बढाउन लागिएको हो । दलहन बाली विस्तार गर्ने लक्ष्यअनुरूप दुई जिल्लामा मुङ खेती विस्तार गर्न लागेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
कोसेदार बालीका रूपमा रहेको मुङ हरियो मलसमेत रहेकाले दुई जिल्लामा यसको खेतीमा विस्तार गर्न लागिएको हो । कृषकलाई मुङ खेतीतर्फ आकर्षित गर्नका लागि मन्त्रालयले शतप्रतिशत अनुदानमा बिउ उपलब्ध गराउने कार्यसमेत सुरु गरेको छ ।
अहिलेसम्म ३२० हेक्टरका लागि अनुदानमा बिउ उपलब्ध गराइसकेको कृषि महाशाखा प्रमुख यज्ञराज जोशीले जानकारी दिनुभयो । कञ्चनपुरको बेलौरीमा साढे चार सय बिघा जमिनमा मुङ खेती गर्ने भनेर सूचना आएको छ, उहाँले भन्नुभयो । अरूतिरबाट पनि मुङ खेती गर्नका लागि किसानले निवेदन दिएकाले यो वर्ष हामीले लक्ष्य निर्धारण गरेकोभन्दा बढी जमिनमा मुङ खेती हुने सम्भावना छ । रासायनिक मल प्रयोगको कारण खेती योग्य जमिनको उर्वराशक्ति तीव्र रूपमा ह्रास भइरहेको बेला जमिनको उर्वराशक्ति बढाउनका लागि पनि मुङ खेती वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मुङ खेती गर्दा यसले माटोको उर्वराशक्ति बढाउने बताइएको छ । मुङ आफै हरियो मल पनि हो ।
चैतबाट लगाउन सुरु गरिने मुङले ५० दिनभित्रै उत्पादन दिन्छ । पाँच पटकसम्म कोसा टिप्नका लागि चैत पहिलो हप्तामै र दुई पटकसम्म कोसा टिप्नका लागि वैशाख १२ गतेसम्म मुङ लगाउन सकिने कृषि महाशाखा प्रमुख जोशीले बताउनुभयो ।
मुङ खेती गर्दा अरू कृषिबालीको जस्तो मिहिनेत गर्नु नपर्ने र सिँचाइ पनि दुईपटक मात्रै आवश्यक हुने गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । ‘मुङ खेतीमा अरू बालीको जस्तो मिहिनेत नगरी छोटो समयमा नै उत्पादन लिन सकिन्छ, जोशीले भन्नुभयो । कीरा प्रकोप समस्या भने बढी रहन्छ तर विषादी छर्केमा जोगाउन सकिन्छ ।
मन्त्रालयका अनुसार राम्रो गरी खेती गरिएमा प्रतिहेक्टर जमिनमा एक हजार दुई सय किलोसम्म मुङ उत्पादन हुने गर्दछ । सुदूरपश्चिममा यसको हालको बजार मूल्य प्रतिकिलो ९० देखि बढीमा दुई सय रुपियाँसम्म रहेको छ । यस वर्ष प्रदेशमा करिब तीन लाख ५० हजार किलो मुङ उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको जनाइएको छ ।
मसिनो धान खेतीका लागि प्रोत्साहन
मसिनो तथा बासनादार धानको आयात घटाउनका लागि यस वर्षदेखि प्रदेशमै मसिनो तथा बासनादार धान उत्पादन कार्यलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । किसानले उत्पादन गर्ने मसिनो तथा बासनादार धान यहाँका मिल व्यवसायीले भारतको समर्थन मूल्यमै किसानको खेतबाट खरिद गर्ने गरी प्रोत्साहनको पहल थालिएको हो । मसिनो तथा बासनादार धानको माग बढ्दो रहे पनि यसको खेतीतर्फ किसानको ध्यान जान सकेको छैन ।
प्रदेशमा मसिनो तथा बासनादार धान उत्पादन निकै न्यून हुने गरेकाले बर्सेनि करिब ५० करोड रुपियाँ बराबरको मसिनो धान भारतबाट यहाँ भित्रिने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैले प्रदेशमै तीन सय हेक्टर जमिनमा मसिनो तथा बासनादार धान खेती प्रबद्र्धन गर्न लागेको कृषि महाशाखा प्रमुख जोशीले बताउनुभयो ।
हामीले हालै मात्रै यहाँका मिल व्यवसायीसँग छलफल गरेका छौँ, उहाँले भन्नुभयो । उहाँहरूले किसानको खेतबाटै आफैले ढुवानी गर्ने गरी भारतको समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष कैलाली, कञ्चनपुरमा दुई सय र पहाडी जिल्लामा एक सय हेक्टर जमिनमा मसिनो तथा बासनादार धान खेती गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पहाडी जिल्लाको डोटी, बैतडी, बझाङ र अछाममा मसिनो तथा बासनादार धानको खेती हुने जनाइएको छ ।
मसिनो धानको खेतीका लागि मन्त्रालयले मलबाहेक अरू आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने, हरियो मललाई प्रोत्साहन गर्ने र सिँचाइमा पनि सहयोग गर्ने जनाइएको छ । अहिले परीक्षणका रूपमा मात्रै तीन सय हेक्टर जमिनमा मसिनो तथा बासनादार धान खेती गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जोशीले भन्नुभयो । पछि पाँच÷पाँच सय बिघाको ठूला प्लट बनाएर बृहत् रूपमा यो धानको खेती विस्तार गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
राष्ट्रपति भवनमा भयो कलाकारमाथि अपमान, घटनाको नालीबेली खुलाए कलाकार सरोज खनालले (भिडियोसहित)
व्यक्तिगत प्यान लिनु भयो ? साउनदेखि तलब नपाइला यसरी भर्नुहोस् अनलाइन फारम
प्रधानमन्त्री ओलीमा आफन्त मोह, कसलाई के बनाए ?
सुनचाँदी किन्दै हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् यस्तो छ आजको भाउ
आइफा अवार्ड नेपालमै गर्न आयोजक काठमाडौंमा, प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गर्न समय कुर्दै
बढ्यो कोरियन वन र कुवेती दिनारको भाउ, हेर्नुहोस् कुन देशको बिनिमयदर कति ?
करोडौं भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तत्कालीन उपकुलपति बलभद्र प्रसाद दाससहि ८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
तामाको औठीं र बाला लगाउँदा हुन्छ यस्तो फाइदै फाइदा
सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटाले भने– एउटै संस्थाले रेडियो, टिभी र एफएम चलाउन पाउँदैन, विदेशी लगानी पनि अस्वीकार्य’
दुर्घटनामा परेका कर्मचारीलाई सुविधासहित अनिवार्य अवकाश दिने